राप्रपा महाधिवेशन - स्पष्ट सन्देश ! - Jagaran Post
यद्यपि राप्रपा महाधिवेशन सकिएको पनि छ र अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन २ सयभन्दा बढि मतसहित बिजयी भएका छन। उनका प्रतिस्पर्धी कमल थापाले लिङ्देनको तुलनामा निकै कम मत पाएका छन।
धर्मको आडमा खेलिने खतरनाक राजनीति राप्रपाले अवलम्वन गर्दै आईरहेको थियो। राजनीतिलाई धर्मको ध्वाँसो देखाएर अवसरवादी चरित्र निर्वाह गर्दै आईरहेको राप्रपा र यस पार्टिका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले बारम्बार जनताको मनोभावमाथी खेल्दै पनि आईरहेका थिए।
हिन्दूराज्य र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आईरहेका निवर्तमान अध्यक्ष थापा २०६३/६३ को जनआन्दोलनपश्चात स्थापित गणतन्त्रको रस्वादान गरिसकेका पात्र हुन। बोली र ब्यवहारमा एकरुपता नभएका थापासंग पार्टिका आम नेताकार्यकर्तादेखि लिएर जनतासम्म उनको द्वैध चरित्रको कारण चिढिएका अवश्य थिए।
देश संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा गईसकेता पनि देशभित्रका आम नागरिकको ठूलो तप्का अझैपनि यी तीनवटै ब्यवस्थाको वर्खिलापमा छन। मुलुकलाई दिनानुदिन औधि बोझ बन्दै गइरहेको संघियता, जवर्जस्ती लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा मौलाएका चरम बिकृतिले गर्दा आम नागरिकमा यी तीनवटै पद्धतिमाथी अविश्वास एवं घृणा फैलंदो क्रम तिव्र छ।
यी तीनवटै ब्यवस्थाका बिरुद्ध (भलै देखावटी नै सहि) राप्रपाले जनतामाझ देखाएका आश्वासन र प्रतिवद्धताका कारण राप्रपाका हरेक गतिविधिहरुप्रति अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाप्रति रुष्ट नागरिकले यस पार्टिप्रति आशा एवं सहानुभूति जनाएका थिए- यौटा आशाको किरणको रुपमा – राप्रपा महाधिवेशन ।
हुन त राजतन्त्रात्मक प्रणालीभन्दा गणतन्त्रात्मक प्रणाली धेरै महंगो भयो भनेर चौतर्फी गणतन्त्रको आलोचना नभएको पनि होईन। राजाभन्दा राष्ट्रपति पद्धति अत्याधिक महंगो भयो भनेर गणतन्त्रको चर्को बिरोध नभएको पनि होईन। तर, मुलुकले अग्रगामी निकाश पाऊनै पर्दथ्यो, पश्चगामी होईन। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतापश्चात पनि राप्रपा, कमल थापा र गाई निशान ती तमाम हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको भरोसाको संकेत थियो। तर, कमल थापाले यहिं मनोभावमाथी बारम्वार छलकपट गर्दै आएका थिए।
यता, राप्रपाको स्थापनाकाल देखिकै सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन राप्रपा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुले धेरै नागरिक खुशी भएको पनि देखिन्छ। राजनीतिशाष्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका लिङ्देन पार्टिभित्र निकै प्रगतिशील, राष्ट्रवादी एवं बिकासप्रेमी नेताको रुपमा परिचित पनि छन।
राप्रपाले राजसंस्था काँधमा बोकेर हिंडोस या नहिंडोस, तर टाऊकोमा कफन बाँधेर गणतन्त्रमा पनि राजसंस्था र हिन्दूराज्यको लागी संघर्ष गर्दै आईरहेको बताएका कमल थापाको टाऊकोमा बाँधिएको कफनको वास्तविक मूल्यको पहिचान यसपाली राप्रपा महाधिवेशनले नै दिएको छ।
देशलाई जनताको इच्छाअनुरुप शाषकले शाषन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। जागजहेर नै छ, गणतन्त्रलाई गौणको बिषय मान्दा पनि धर्मनिरपेक्षता र संघियता नेपालमा जवर्जस्ती स्थापित गरिएका बिषय हुन। यसको बारेमा खुलस्त रुपमा जनमत बटुलिएकै होईन।
मुलुकले गणतन्त्रका १५ बर्षमा के पायो र कति गुमायो भन्ने त सर्वविदितै छ। राजेन्द्र लिङ्देनलाई नारायणहिटीबाट धपाईएका ज्ञानेन्द्रले सहयोग गरे भनेर हारपश्चात उनका सामाजिक संजालहरुमा ब्यक्त अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ- कमल थापाले अवसरवादी राजनीति अवश्य गरेका हुन भनेर।
खासमा मुलुकलाई पश्चगमन होईन अग्रगमन नै हो चाहिएको। हामी नेपालका नागरिक सबैखाले मुलधारका राजनैतिक दलबाट आजित छौं। किनकि हामीले परिवर्तनको नाममा बदमासी मात्र ब्योहोर्यौं।
राजनैतिक ब्यवस्था सहि ट्र्याकमा आए हामीलाई राजसंस्था होस या गणतन्त्र- केहि फरक पर्दैन। तर, सबै दल र तिनका नेताको नियत नै खराब हुन्छ त हामीलाई जुनसुकै ब्यवस्था आए पनि आकाशको फल हो। आक्रोशरुपी भुसको आगो हो।
सबै दलमा अतिवाद छ। मपाईत्व छ नेतृत्त्वमा। कमल थापामा पनि थियो।
यसभन्दा अंघि नारायणी किनारमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनले फेरि उहीँ यौटा अतिवादलाई पस्रय दियो। तर, राप्रपा महाधिवेशनले त्यसो हुन भने दिएन।
परिवर्तनको पक्षमा भोट हाल्ने तमाम राप्रपा कार्यकर्ताप्रति साधुवाद !
जागरणपोस्टलाई फेसबुक, ट्विटर, टिकटक र युट्युवमा फ्लो गर्न सक्नुहुनेछ।